Wararkii ugu dambeeyay dalka Libya - BBC News Somali
Wararkii ugu dambeeyay dalka Libya
26 Febraayo 2011
Image caption Qalalaasaha dalka Libya ka socda
Weriye reer Libya ah waxaa uu BBCda u sheegay in dukaamadu ay furnaayeen dadkuna ay hawlahooda caadiga ah iska wateen. Weriyuhu waxaa uu sheegay in taageerayaasha hoggaamiyaha Libya, Kornayl Qaddaafi, ay joogeen fagaaraha cagaaran ee bartamaha Triboli. Dad goobjoog ahaa waxay sheegeen in dabley dowladda taageersan ay dadweynaha rasaas ku fureen salaaddii Jimcaha ee shalay kaddib. Mid ka mid ah wiilasha kornayl Qaddaafi, Saif Al Islaam, waxaa uu qirtay in ciidammada dowaldda ay dhibaato ka qabsatay labo magaalo oo galbeedka dalka ku yaalla oo kala ah: Misrata iyo Zawiya.
Dhinaca kale, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta mar kale ku shiraya magaalada New York si ay uga fiirsadaan tallaabooyin cuna qabateyn ah oo ka dhan ah kornayl Qaddaafi, qoyskiisa iyo taageerayaashiisa. Qaraar qabyo ah, oo dalalka Britain, France, Germany iyo Maraykanka ay taageersan yihiin, waxaa uu ku baaqayaa cuna qabateyn hubka ah, mamnuucid socdaalka iyo xayiraad lacagaha in la soo rogo iyadoo laga jawaabayo dhiigga daadanaya.
Waxaa kaloo jira hindise ku saabsan in kornayl Qaddaafi loo diro maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah iyadoo lagu eedeynayo dembiyo bani'aadanimada ka dhan ah. Maalintii shalay madaxweyne Obama waxaa uu xayiray hantida dalka Libya, isagoo sheegay in hoggaamiyaha Libya uu ku xad-gudbay nidaamka caalamiga ah iyo hab dhaqanka wanaagsan.